Home > Travel Europe > Top 5 Best Day Trips avy Brussels
(Last Nohavaozina: 14/09/2020)
Ghent dia momba antsika 5 Andro tsara indrindra nivezivezy avy any Brussels lisitra satria dia fantatra amin'ny maha-iray amin'ireo Belzika tamin'ny Moyen Âge harena ara-kolontsaina sy ny vidiny, izany hoe; mozika, teatra, horonan-tsary, ary sary. Izany ihany koa faran'izay akaiky Brussels, hita ihany 60 kilaometatra avy ao Brussels ary azo mora foana tratra lamasinina.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra tokony hatao ao mahafatifaty ity tanàna fahiny dia ny hijery izany amin'ny alalan'ny tongotra, mba hisambotra topimaso ao aminy mampino Moyen Âge trano, ary koa mba mahatsapa ny rivo-piainana mavitrika.
fiderana Ny fitsaohana ny mahagaga Zanak'ondry ny Van Eyck rahalahy miorina ao anatin'ny Saint Bavo Cathedral. Tsidiho ny Belfry ny Ghent, ny Town Hall, ary hahazo an-tanàna akaiky kokoa amin'ny tantaran'ny varotra Old Fish Market.
Get mifandray amin'ny lasa amin'ny Anne Frank House, hianatra momba ny zavakanto tao amin'ny Rijksmuseum, Van Gogh sy Rembrandt House mozea, ary mankafy ny malaza Heineken Experience. Sahisahy mpandeha dia afaka manofa bisikileta, ary hijery ny eny an-dalambe, mari-toerana manan-tantara, ary lehibe Pubs ny Amsterdam. Nandritra izay fotoana izay, romantics dia afaka manana traikefa miavaka Amsterdam raha mankafy ny miala voly mitaingina lakana.
Izany ihany no Mila 2.5 ora avy any Brussels mba ahatongavana any. Rehefa mitsambikina eny ny fiaran-dalamby, loha tsy mahazo manao amin'ny renivohitry ny Grand Duchy ary manomboka ny fitsidihana amin'ny trandrahana ny Kirchberg lafiny manan-danja maro sy ny trano toy ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Justice, ary ny Kaomisiona Eoropeana. Mahagaga tao amin'ny Notre Dame Cathedral, iray nanan-tantara izay Mitambatra tsara ny tara Gothic amin'ny Renaissance haingo trano. Tohizo amin'ny nirenireny manodidina ny mahafatifaty arabe. Tandremo sao tsy mahita misambotra te hahafantatra momba ny Lapan'ny ny Grand Duke sy ny tanàna fiarovana mafy.
Toy ny maro Belza tanàna, kianja eny an-tsena dia ahitana ny mahavariana nahay ny maritrano. Izany ihany koa, satria be dia be ny sisa tavela tamin'ny Moyen Âge maritrano efa naverina tamin'ny laoniny. Tamin'ny sambatra kokoa ny naoty, raha toa ianao ka foodie, dia ho tia ny nentim-paharazana Flemish nahandro ary mazava ho azy, labiera.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Easy nivezivezy Day By Train From Milan” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-from-brussels/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
bruges Brussels Daytrips Ghent Luxembourg fiaran-dalamby Travel torohevitra Travel traveltips